၆ သင်၏စီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ရန်နိမ့်ကျသောနည်းလမ်းများ! - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B6B စျေးကွက်သတင်း
မတ်လ 24, 2021 မတ်လ 21, 2021 အဲလက်စ်ဘီလီ B2B, ဘ‌‌လော့ခ်, စီးပွားရေး, အသားပေးသတင်းများ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်ကားအွန်လိုင်း, အွန်လိုင်းလက်ကားနှင့် B2B, အွန်လိုင်းလက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်, B2B အွန်လိုင်းကိုဝယ်ပါ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်, လက်ကားအွန်လိုင်းစျေးဝယ်, လက်ကား, လက်ကား - B2B, လက်ကား & B2B စျေးကွက်, လက်ကားစျေးကွက်အွန်လိုင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း
၎င်းတို့တွင်သင်၏လုပ်ငန်း၌အလားတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပူးပေါင်းခြင်း၊ အွန်လိုင်းကွန်ယက်ပွဲများတက်ရောက်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုပြတ်လပ်မှုနှင့်လေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်ခြင်းစသည်တို့ပါဝင်သည်။
များစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်းစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကိုကြုံတွေ့နေရသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်း၊ နိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်မှု၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြissuesနာများသို့မဟုတ်အခြားအရာများကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းကိုငြင်းဆိုစရာမရှိပါ မကြာသေးမီလများကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ပါစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ခဲ့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်မည်သည့်နေရာ၌ရှိနေပါစေ၊
သို့သော်၊ ဤခက်ခဲသောအချိန်များအတွင်း၌ပင်သင်စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်၊ ဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့်စျေးကွက်တွင်ဆက်လက်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင့်လုပ်ငန်းကိုသင့်ပစ်မှတ်ထားပရိသတ်အတွက်ပိုမိုမြင်သာအောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်အောင်မြင်နိုင်သည်။ သင်၏ချဉ်းကပ်မှုတွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ရည်မှန်းချက်ကြီးမှုရှိရန်ကြိုးစားပါ။ သင်၏စီးပွားရေးကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အောက်ပါအားကောင်းသော - underrated - နည်းလမ်းခြောက်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။
ဖောက်သည်များနှင့်ဖောက်သည်များ၏မျက်လုံးကိုဖမ်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်၏အရည်အချင်းနှင့်ဗဟုသုတကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ စက်မှုလက်မှုလက်မှတ်များနှင့်အသိအမှတ်ပြု အမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားသင့်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာသင်ဟာတရား ၀ င်ပြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိသူဖြစ်ကြောင်းလက်ငင်းအချက်ပြပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများနှင့်ဖောက်သည်များသည်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ခံကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုတေသနပြုရန်အချိန်သို့မဟုတ်ဆန္ဒမရှိကြပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်အရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုများကိုလျင်မြန်စွာပြသနိုင်ရန်ကြိုးစားသည်။
၎င်းတို့အနက်မှယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးနှင့်ထိရောက်သောအချက်အလက်များမှာအခြားဖောက်သည်များမှကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်စက်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များသို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းများဖြစ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်သင်အသုံးချနိုင်သောလေ့ကျင့်မှုသို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုမှုကိုသင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းကကမ်းလှမ်းပါသလား။ ယနေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးပါ!
သင်သည်သင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌ဝါရင့်ဖြစ်စေ၊ လူသစ်ဖြစ်စေ၊ သင်နှင့်သင်၏အဖွဲ့သည်နောက်ထပ်လေ့ကျင့်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံရရှိခြင်းမှအစဉ်အကျိုးခံစားရပါလိမ့်မည်။ သင်သတိမပြုမိသောစက်မှုလုပ်ငန်းအပြောင်းအလဲများသို့မဟုတ်သင့်အဟောင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်သောချဉ်းကပ်မှုအသစ်တစ်ခုရှိနိုင်သည်။
သင်ကြားမှုသည်သင်နှင့်သင်၏လုပ်သားအင်အားကိုပိုမိုကျွမ်းကျင်ပြီးထိရောက်စွာဖြစ်လာရန်ကူညီခြင်းနှင့်အတူရှုထောင့်အသစ်ကိုလည်းပေးနိုင်သည်။ သင်သည်စျေးနှုန်းအမျိုးမျိုးဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်းတွင်ပါဝင်နိုင်သည်ကိုမမေ့ပါနှင့် - ၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်သော (နှင့်စျေးကြီးသော) စက်မှုလုပ်ငန်းသင်တန်းနှင့်ဖြစ်စေ၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွင်ဖြစ်စေအခမဲ့ဖြစ်သည်။
အပြောင်းအလဲကာလနှင့်မငြိမ်သက်မှုတို့သည်အခြေခံများသို့ပြန်သွားရန်အလွန်ကောင်းသည့်အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤနေရာတွင်မကြာခဏသင်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုများကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပြီးတိုးတက်မှုအရှိဆုံးကိုမြင်နိုင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အသေးစိတ်ရှင်းပြစရာမလိုဘဲ။
အကောင်းဆုံးဥပမာကတော့မင်းရဲ့ဘတ်ဂျက်ပဲ။ သင်၏ဘတ်ဂျက်ကိုပုံမှန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အသစ်ပြောင်းခြင်းအားဖြင့်၊ သင်၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်သင်တတ်နိုင်သည့်အရာများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပါကထွက်ပေါ်လာသောထွက်ငွေများသည်အလိုအလျောက် (သို့) သတိလစ်သွားခြင်းနှင့်သင်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်သတိရှိရှိသုံးစွဲနေကြောင်းသေချာစေနိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏စာရင်းစစ်ဖြစ်စေ၊ ပညာရှင်တစ် ဦး ၏အကူအညီကိုရယူသည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏စီးပွားရေးဘတ်ဂျက်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီးလန်းဆန်းစေပါ။
သင်၏စီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ရန်အလွန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းမှာပိုမိုတက်ကြွ။ မြင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များအတွက်ဤအချက်သည်အွန်လိုင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ရက်နှစ်ခုလုံးအတွက်အကျုံးဝင်သည်။
လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာကွန်ယက်တွင်ဖြစ်ရပ်များ၊ ညီလာခံများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းစုဆုံပွဲများတက်ရောက်ခြင်းပါဝင်နိုင်သည်။ လူမှုရေးအရအဝေးမှသို့မဟုတ်ဝေးလံခေါင်သီသောကွန်ယက်နည်းလမ်းများတွင် livestreams၊ online Q & As နှင့်တက်ကြွ။ လူမှုမီဒီယာရှိနေခြင်းကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။
လူအများစုကအဆက်ပြတ်နေခြင်းသို့မဟုတ်အထီးကျန်ခြင်းကိုခံစားနေရသည့်အချိန်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များသည်လူတို့အားဆက်သွယ်မှုအသစ်များတည်ဆောက်ရန်နှင့်စစ်မှန်သောလူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်။
သင်၏စီးပွားရေးသည်ပူးပေါင်းမှုမှအကျိုးရှိနိုင်မလားစဉ်းစားပါ။ ဥပမာအားဖြင့်သင့်အနေဖြင့်ထပ်တူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်သင်နှင့်ဆင်တူသောလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်လုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်း၊ ဒေသခံအစပျိုးမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်တွဲဖက်သို့မဟုတ်သြဇာသက်ရောက်သည့်အစီအစဉ်နှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ရန် (သို့မဟုတ်သုံးဆထပ်တိုးရန်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသော) အလားအလာရှိသောသင်၏စီးပွားရေးကိုတိုးမြှင့်ရန်နည်းလမ်းကောင်းမရှိပါ။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည်ကွန်ယက်များတည်ဆောက်ရန်နှင့်မျှဝေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများမှအကျိုးကျေးဇူးခံစားရမည့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဖောက်သည်များကသင့်အားမြင်စေရန်။
သင်၏စီးပွားရေးစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ရန်အလွန်အမင်းနိမ့်သောအချက်မှာ၎င်း၏အားနည်းချက်များကိုရိုးသားရန်ဖြစ်သည်။ သင်နှင့်ရုန်းကန်နေရသည့်အချိန်၊ အချိန်မရှိသောသို့မဟုတ် ၀ မ်းနည်းပူဆွေးခြင်းပင်ခံစားရသည့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များမှာအဘယ်နည်း။ ဤရွေ့ကားအများဆုံးအာရုံကိုလိုအပျသောသူမြားဖွစျနိုငျ!
ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ကျွမ်းကျင်သူများကိုအလုပ်ခန့်အပ်ရန်စဉ်းစားပါ။ သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရမည်။ များစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်လေလံဆွဲသူများနှင့်တင်ဒါစာရေးသူများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြသည် သူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့် အလုပ်လုံခြုံရေးအဘို့။ အခြားသူများသည်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအွန်လိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးနှင့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းများဖြင့်ရေးသားနိုင်သည့် copywriters များကိုသုံးရန် SEO ကျွမ်းကျင်သူများကိုငှားရမ်းသည်။
စီးပွားရေး အများပိုင်သတင်း တိုးတက်မှုနှုန်း စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း
အဲလက်စ်သည်ယူကေအခြေစိုက် B2B မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာဖြစ်သည်။ သူကဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာ၊ ကျန်းမာရေး၊ သာယာဝပြောရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ အဲလက်စ်မှာအလုပ်လုပ်တယ် နယူး Frontiers စျေးကွက်.
အောင်မြင်သောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအတွက်ဘယ်လိုထုပ်ပိုးရမလဲ - သိကောင်းစရာ ၃ ချက်